सबैका लागि स्मार्ट होम समाधानहरू - १ things चीजहरू जुन स्वचालित हुन सक्छन्। स्मार्ट घर - कसरी गर्ने? - स्मार्टमे
सबैको लागि स्मार्ट होम - १ things चीजहरू जुन स्वचालित हुन सक्छन्
स्मार्ट घर, स्मार्ट घर
जब हामी तपाईंको स्मार्ट घरको योजना गर्दछौं, सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रा आवश्यकताहरूलाई परिभाषित गर्नु हो। हामी त्यसपछि आफैलाई आधारभूत प्रश्न सोध्छौं - हामी के यो प्रकारको टेक्नोलोजीसँग स्वचालित गर्न सक्छौं?
हामी एक निर्माताबाट उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं, तब यो कन्फिगर र स्वचालित रूपमा धेरै सरल छ, तर यसले हामीलाई उत्पादनहरूको संख्याको हिसाबले सीमित गर्दछ। वैकल्पिक खुला स्मार्ट घर समाधान हो, जस्तै गृह सहायक, डोमोटिक्स् वा ओपन हब, जसले धेरै बिभिन्न उत्पादकहरूबाट उत्पादन एकीकरण प्रस्ताव गर्दछ, तर हामीबाट बढि समय चाहिन्छ।
हामी प्रायः विभिन्न उत्पादहरू बारे प्रश्नहरू पाउँछौं जुन स्मार्ट घर बनाउँदछ जुन स्वचालित हुन सक्छ। त्यसैले हामीले एउटा सूची बनाउने निर्णय गर्यौं। स्मार्ट घर समाधानहरूको सूची धेरै लामो हुनेछ, त्यसैले हामीले यसलाई भागहरूमा विभाजन गर्‍यौं। आज हामी यसको पहिलो किस्त प्रकाशित गर्दछौं।
स्मार्ट घर बनाउनको लागि हामी के स्वचालित गर्न सक्छौं:
लाइट्स - हामी तिनीहरूलाई दुई तरिकाले स्वचालित गर्न सक्छौं:
१.१। जब बौद्धिक प्रकाश प्रणालीहरू खरीद गर्नुहोस् - बत्तीहरू वा व्यावहारिक रूपमा "स्मार्ट" हुने दीप वा एलईडी स्ट्रिपहरू। फिलिप्स ह्यू वा योलाइट एक उदाहरण हो।
1.2। स्विचहरूको लागि ड्राइभरहरू खरीद गरेर, जुन फलस्वरूप क्यानमा राखिन्छ। त्यसो भए हामी कम मूल्यमा कुनै पनि उज्यालो बुद्धिमान बनाउन सक्छौं। उदाहरणका उपकरणहरू ZAMEL, Sonoff, Shelly, Fibaro हुन्।
२. अलार्म - हामी अलार्म एकीकृत गर्न सक्दछौं ताकि यो साझा स्क्रीनमा हाम्रो अन्य उपकरणहरूसँग देखा पर्नेछ। एक उदाहरण समाधान घर सहायक द्वारा समर्थित ETH-2 मोड्युलको साथ Satel Integra प्रणाली हो। यी बौद्धिक उपकरणहरू हुन् जससँग स्मार्ट घरका विभिन्न तत्वहरूको नियन्त्रण स्वचालित हुन्छ।
Sen. सेन्सरहरू - हामी घरमा धेरै सेन्सरहरू राख्न सक्दछौं। पानी, धुवाँ, ग्यास, कार्बन मोनोअक्साइड, स्थान परिवर्तनको लागि सेन्सरहरू। यी सेन्सरहरूले हामीलाई सूचित गर्दछ कि केहि गलत छ। जब उनीहरूले कुनै खतरा पत्ता लगाउँछन्, तिनीहरूले तुरून्त हामीलाई सूचित गर्दछन्। त्यस्ता सेन्सरहरू अकारा, फिबारो वा अन्य निर्माताहरूबाट हुन सक्छन्।
Re. रीड स्विचहरू र मोशन सेन्सरहरू - यी पनि सेन्सरहरू हुन्, तर तिनीहरूको व्यापक अनुप्रयोग हुन्छ। ती दुबै अलार्मको तत्वको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ (सेन्सरले केहि पत्ता लगाएको छ) र स्वचालित ट्रिगर गर्ने तत्वको रूपमा। हामी घरभित्र प्रवेश गर्छौं, रीड स्विच रिलिज भएको छ र प्युरिफायर अब सुरु भएको छ। वा हामी कोठामा प्रवेश गर्दछौं, आन्दोलन पत्ता लगाइएको छ, त्यसैले प्रकाश खुल्यो। त्यस्ता सेन्सरहरू अकारा, फिबारो वा अन्य निर्माताहरूबाट हुन सक्छन्।
Ol. रोलर ब्लाइन्ड कन्ट्रोलरहरू - रोलर ब्लाइन्ड कन्ट्रोलरहरूले हामीलाई अन्धाको बढाउन र घटाउन स्वचालित गर्न अनुमति दिन्छ। यसका लागि धन्यबाद, हामी उदाहरणका लागि, स्वचालित रूपमा सम्पूर्ण घर "बन्द" गर्न सक्दछौं वा चलचित्र हेर्दा अन्धा पट्टि घटाउन सक्छ। ड्राइभर प्रणालीका निर्माताहरूले समावेश गर्दछ Zamel, Shelly र Fibaro।
Tempe. तापमान र आर्द्रता सेन्सर, अपराह्न २.6- यस प्रकारको सेन्सरले हामीलाई अपार्टमेन्टमा व्यक्तिगत प्यारामिटरहरूको स्थिति बारे सूचित गर्दछ। हामी तापमान, आर्द्रता प्रतिशत र पीएम २. 2.5 एकाग्रता जान्न सक्छौं। यसले ट्रिगर गर्न सक्दछ, उदाहरणको लागि, एक प्युरिफायर वा एयर ह्युमिडिफायरको सक्रियता, जसले हावाको गुणस्तर सुधार गर्दछ, र यसरी जीवनको आराम पनि। त्यस्ता सेन्सरहरू अकारा वा सियामीबाट हुन सक्छन्।
Smart. स्मार्ट सकेट्स - स्मार्ट सकेटले हामीलाई उपकरण स्वचालित गर्न अनुमति दिन्छ जुनसँग स्मार्ट फंक्शन छैन, जस्तै पुरानो टिभी वा केटल। हामी यसलाई टाढाबाट खोल्न र बन्द गर्न सक्षम छौं र ऊर्जा खपत जाँच गर्न सक्दछौं। सकेटको उदाहरणहरू श्याओमी, अकारा, फिबारो, स्मार्ट डीजीएम हुन्। स्मार्ट घर समाधानहरू जुन सुविधाको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ईकोलोजी र बचतको लागि पनि।
He. ताप नियन्त्रण - यस अवस्थामा, हामी टाढाबाट हीटिंग कन्ट्रोल गर्न सक्छौं, दुबै अन्डरफ्लोर र साधारण रेडिएटरहरू। यसको लागि धन्यबाद, हामी टाढा टाढा हाम्रो अपार्टमेन्टमा तापमान नियन्त्रण गर्न सक्छौं। यसको लागि आवश्यक उपकरण प्रणाली प्रदान गर्ने निर्माताहरूका उदाहरणहरू टाडो, नेटटमो, हनीवेल, फिबारो हो।
G। गेट नियन्त्रण - यस स्मार्ट समाधानको एक भागको रूपमा मोबाइल अनुप्रयोगमा सेटिंग्स सही तरीकाले कन्फिगर गरेर हामी प्रवेश द्वार वा गेराज गेट टाढैबाट नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। त्यस्ता उत्पादनहरूका उत्पादकहरू पनि अरू हुन् Zamel र नाइस।
१०. स्मार्ट भिडियो इन्टरकॉमहरू - यदि हामी टाढाबाट हामी कहाँ जान चाहन्छौं भनेर हेर्न चाहन्छौं भने हामी यसलाई स्मार्ट भिडियो इन्टरकॉमलाई धन्यवाद दिन सक्छौं। एक उदाहरण नाइस हो।
११. स्मार्ट ढोका लकहरू - यदि हामी टाढैबाट हाम्रो ढोका खोल्न चाहन्छौं भने हामी एउटा स्मार्ट लक स्थापना गर्न सक्छौं जुन मोशन सेन्सर समावेश गर्दछ र अनुप्रयोगको सहयोगले कन्फिगर गरिएको छ। यस प्रकारका उत्पादनहरूका निर्माताहरू अकरा, गर्डा वा अगस्ट हुन्। यसको लागि धन्यबाद, तपाईंले ढोका खोल्न कुञ्जी घुसाउन वा फर्काउनु हुँदैन।
१२. रोबोटहरू - खाली वा मोपिing रोबोटहरू पनि स्वचालनमा जडान गर्न सकिन्छ। हामी यो iRobot, Roborock, Xiaomi वा Viomi रोबोटको साथ गर्न सक्दछौं।
१.. प्युरिफायर र ह्युमिडिफायरहरू - यो खण्ड पनि हाम्रो स्मार्ट घरमा जडान गर्न सकिन्छ। त्यस्ता उपकरणहरू शाओमी, फिलिप्स, सामसु or वा शार्पको प्रस्तावमा फेला पार्न सकिन्छ। किनभने केहि मोडेलहरू एक गति सेन्सरले सुसज्जित छन्, तिनीहरू सक्रिय गर्न सकिन्छ जब कोही कोठामा प्रवेश गर्छन्।
हामी हाम्रो सूचीको पहिलो भागलाई नम्बर १ part को साथ बन्द गर्छौं। हामी तपाईंलाई जोडदार साथ टिप्पणी गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। हाम्रो सूचीमा तपाईले के याद गरिरहनु भएको छ लेख्नुहोस्। हामी यसलाई सँगै सिर्जना गर्नेछौं। सूची वास्तवमै लामो हुन सक्छ ... र यो सुन्दर छ!
बाट फोटो थॉमस कोलोनोस्की na Unsplash
Satel, Nice, Netatmo बाट फोटोहरू
स्मार्ट घर समाधानका धेरै फाइदाहरू छन्
जैसा कि तपाईं माथिका उदाहरणहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ, गृह जीवनको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई स्वचालित अहिले ठूलो समस्या होइन। स्मार्ट होम टेक्नोलोजीको मामलामा, यसले मुख्य कुञ्जी फाइदाहरू पनि उल्लेख गर्न लायक छ जसले स्मार्ट घर प्रणालीको डिजाइन र स्थापना गर्दछ। यहाँ शीर्ष are छन्!
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले संकेत गरे कि उनीहरू स्मार्ट घरको विचार मन पराउँछन् मुख्य रूपमा उनीहरूको सुरक्षाको भावना बढाउने सम्भावनाको कारण। स्मार्ट घर समाधानहरूले तपाईंलाई सम्पत्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा छलफल गरिएको मानक उपकरणहरूको अपरेसन एकीकृत गर्न र सुधार गर्न अनुमति दिन्छ, अर्थात् क्यामेरा वा सेन्सरहरू। आज, अपार्टमेन्टबाट हजारौं किलोमिटर टाढा मोबाइल अनुप्रयोगको सहायताले घरमा स्थिति नियन्त्रण गर्न कुनै ठूलो समस्या छैन। सुरक्षा एजेन्सीसँग सम्भव सहयोग पनि बढी प्रभावकारी छ किनभने सुरक्षालाई समर्थन गर्ने थप समाधानहरू छन्।
टेक्नोलोजीहरू जस्तै मोशन सेन्सर बाह्य प्रकाशको साथ संयुक्त चोरहरूको कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछन् र निवारक र निवारक गुणहरू छन्। प्रणालीलाई आगो, बाढी वा धुम्रपान जस्ता अन्य जोखिमहरू रोक्नको सन्दर्भमा पनि विचार गर्न सकिन्छ। मोशन सेन्सरहरू केवल सेन्सरहरू होइनन् जुन स्मार्ट घरमा लगानी गर्न र राख्नको लागि योग्य छ। एक प्रेरणादायक समाधान पनि स्वचालित रोलर शटरहरू हुन् जसले घरका सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा परिदृश्यहरूको भूमिका खेल्ने समर्थन गर्दछ, खाली भवन भित्र हुने "दैनिक जीवन" को नक्कल गर्दै।
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि स्मार्ट होम टेक्नोलोजीको लागि ऊर्जा बचत भयो। कम्तिमा दुई आधारभूत कारणहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण फाइदा हो। पहिले, ग्रहको रक्षा गर्नुहोस्। यो विषय सार्वजनिक बहसको एक मुख्य भएको छ। इलेक्ट्रॉनिक समाधानलाई सचेततापूर्वक छनौट र एकीकृत गरेर, तपाईं विद्युत खपत कम गर्न सक्नुहुन्छ, र यसैले हानिकारक उत्सर्जन र अत्यधिक खपत कम गर्न गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहोस्।
दोस्रो, तपाइँको वालेटमा फरक देख्नुहुन्छ। स्मार्ट समाधानहरूले एक निश्चित लागत उत्पन्न गर्दछ, तर यो एक लाभदायक लगानी हो, कुनै व्यय जसले कुनै लाभ ल्याउँदैन। उचित चयन र उत्तम विन्यास उपकरण र add-ons निश्चित शुल्क कम। थप रूपमा, एक मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत नियन्त्रित उपकरणहरू प्रेरणा दिन्छन् र थप ऊर्जा-बचत लगानीहरूमा झुकाउँछन्। उदाहरणको लागि, धेरै मानिसहरूले नवीकरणीय उर्जा स्रोतहरूको दुनियामा प्रवेश गर्ने र सौर प्यानल वा तातो पम्पहरू खरीद गर्ने निर्णय गर्छन्। इको टेक्नोलोजी पनि प्रणालीमा समावेश गर्न सकिन्छ।
स्मार्ट घरमा दैनिक जीवनको एक महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको सान्त्वना हो। स्वचालनको लक्ष्य भनेको प्रक्रियाबाट सरल बनाउनु र व्यक्तिहरूबाट वर्गलाई घटाउनुहोस्। प्रयोगकर्ता सुविधा बृद्धि गर्नु प्राविधिक नवीनताहरूको महत्वपूर्ण अंशको प्राथमिक कार्य हो। जब कसैले सोध्यो: "किन तपाईं स्मार्ट घर समाधानहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ यदि ती जीवनका लागि आवश्यक छैन भने?", तपाईं केवल विश्वमा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ: "आफ्नै सुविधाको लागि!"
वास्तवमा, साना गतिविधिहरु को लागी हाम्रो ध्यान र ऊर्जा लिन्छ। यस बीच, बच्चाहरु र परिवारको हेरचाह गर्नु, तपाईको आफ्नै व्यवसाय चलाउनु वा दैनिक कर्तव्यहरुको एक ठूलो थकाउ, नीरस कर्तव्यहरु को लागी एक प्राथमिकता हुनु पर्छ। प्रणालीको बुद्धिमत्ता, निजीकृत तत्वहरू, उदाहरण: ढोका वा गेट खोल्दा, प्रकाशमा स्विच गर्ने वा तापक्रम सेट गर्न सहज हुन्छ र उनीहरूको ठूलो फाइदा।
समय बचत गर्दै
सुविधाको हिसाबले त्यहाँ समान रूपले महत्त्वपूर्ण फाइदा छ, अर्थात् समय बचत गर्ने। यदि हामी सूचीबद्ध स्वचालित वस्तुहरूको सूची विचार गर्छौं, उदाहरणका लागि प्रकाश, सेन्सरहरू र अलार्महरूको नियन्त्रण, गेट नियन्त्रण, वायु शुद्धिकरण र अन्य धेरै, हामी एक समय कन्फिगुरेसनले कति समय बचत गर्न सक्नेछौं भनेर देख्नेछौं।
तपाईंको स्मार्ट घरको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ तपाईं बहुमूल्य मिनेटहरू खेर फालिरहँदा वा ब्लाइन्डहरू कम गर्नुहुन्न, बत्ती बदल्नुहुन्छ, उर्जा स्रोतहरू विच्छेदन गर्नुहुन्छ, सुरक्षा प्रणालीको तत्वहरू जाँच्नुहुन्छ वा ढोकामा पुग्नुहुन्छ। जहाँसम्म तपाईले धेरै व्यस्त तालिकाको साथ जीवन बिताउनु भएन भने पनि, तपाईले धेरै प्रोसेसिक भन्दा धेरै रमाईला गतिविधिहरू पाउनुहुनेछ, जुन तपाईको खाली समयको ठूलो हिस्सा लिन्छन्।
एक स्मार्ट प्लस जुन स्मार्ट घरको सन्दर्भमा उल्लेख गर्न लायक छ यसको विश्वव्यापी चरित्र हो। प्रत्येक कार्यान्वयन वास्तवमै नयाँ गुण हो। दर्जनौं समाधानहरू मिलाउन सक्ने क्षमता, केवल एक निर्माताको वातावरणमा मात्र (उदाहरणका लागि स्याओमी), अधिकतम निजीकरणको सम्भावना सिर्जना गर्दछ।
अधिक के हो, स्मार्ट घर प्रविधि परिमार्जन गर्न सकिन्छ। समयको साथ, तपाईं प्रणालीमा थप सम्भावित थपहरू देख्नुहुन्छ, सुविधा र सुरक्षाको भावनालाई बढि प्रशंसा गर्दै जुन साना सानो तत्वहरूले देखाउँदछ। त्यसोभए तपाईले स्क्र्याचबाट उपकरणहरूमा लगानी गर्नुपर्दैन। तपाइँ एक सिद्ध पहेली मा एक तत्व जोड्नुहोस्, वा एक तपाइँलाई अब आवश्यक छैन छुटकारा।
स्मार्ट घर टेक्नोलोजीहरू बर्ष-बर्ष देखि विकसित हुँदैनन्, तर महिना देखि महिना सम्म। हाम्रो १ 13 चीजहरूको सूचीलाई स्वचालित रूपमा चाँडै नै अन्य प्रकारका उपकरणहरूसँग पूरक हुन आवश्यक पर्दछ। यो एक अपरिहार्य प्रक्रिया हो जुन तपाईंको घरलाई उत्तम प्रणालीहरूको साथ सुसज्जित गर्न निम्नको लायक हो।
आर + टीमा सोम्फी समाचारहरू
स्मार्ट घर, SOMFY
विश्वको मेलाहरू जस्तै, आर + टी यस बर्ष भर्चुअल विश्वमा सारिएको छ। घटनाको बखत, सोमफाइ ब्रान्ड प्रस्तुत गरियो, डिजिटल सूत्रमा, incl। TaHoma नियन्त्रण इकाई को एक नयाँ पीढी, जो को लागी धेरै सुविधाहरु प्रदान गर्दछ ...
शाओमीले यस बर्ष स्मार्ट घर उत्पादनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छ
स्मार्ट घर, Xiaomi
लु वेबिंग - सियाओमीका उपाध्यक्ष र रेडमी ब्रान्डका सीईओले घोषणा गरे कि कम्पनीले यस वर्ष स्मार्ट घर व्यवस्थित गर्न ठूलो संख्यामा उत्पादनहरू निर्माणमा केन्द्रित गर्नेछ। उनले यो जानकारी प्लेटफर्म मार्फत प्रदान गरे ...
रिंगले नयाँ उत्पादन ल्यायो, अरू भन्दा दुईपटक सस्ता!
अंगूठी, स्मार्ट घर
स्मार्ट र इनोभेन्टि door डोरबेलहरू उत्पादन गर्ने नाम चलेको कम्पनीले एउटा नयाँ उत्पादन ल्याएको छ जुन आधा मूल्य हो! कम मूल्य, तर के को लागत मा? तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कम मूल्यको साथ, निर्माताले केही सुविधाहरू पनि काट्यो। –...
स्मार्ट स्केल स्केल पहिल्यै पोल्याण्डमा डेलिभर भइसकेको छ
स्मार्ट, स्मार्ट घर, स्मार्ट मापन
हालसालै, अभिनव स्मार्ट स्केल स्केल प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन पोल्याण्डमा पहिले नै बेचिएको छ। होईन, यो अन्त छैन। यो हाम्रो देशको स्मार्ट होम बजारमा निर्माता रियलमीको एकसाथ डेब्यू हो। सबै कुरा औंल्याउँछ ...
स्मार्टटिings्ग र एओटेक - फोर्समा सामेल हुनुहोस्
एओटेक, Samsung, स्मार्ट घर
२०१ 2013 सम्ममा, सामसु Smart स्मार्टटिings्हरू सबैभन्दा लोकप्रिय स्मार्ट घर प्लेटफर्महरूमध्ये एक भएको छ - million 63 मिलियन भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूसँग। स्मार्टटिings्स्, तथापि, स्थिर रहनको लागि योजना गर्दैन र खुला ईकोसिस्टमको निर्माणको गतिलाई गति दिनको लागि योजनाहरू लागू गर्दछ ...
समाचार, स्मार्ट होम, शाओमी होम
चिनियाँ स्मार्ट होम बजार - तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि नेता को हो?
चीन, स्मार्ट घर, Xiaomi
यो गाह्रो प्रश्न होईन;) तर सबै ठीक समयमा। Q2020 XNUMX चीनमा स्मार्ट होम बजार हेर्नका लागि समय। यो जहाँ हामीले प्रयोग गर्ने प्राय उत्पादनहरू बनाइन्छन्। राज्यको लागि सारांश ...